DEG DEG:- Madaxweynaha Uganda Yoweri Moseveni oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Madaxweynaha Uganda Yoweri Moseveni oo goordhaw soo gaaray magaalada Muqdisho
Wafdi ay hogaaminaayo madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Moseveni ayaa daqiiqado kahor garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo ka qeyb gali doonno shirka madaxda urur goboleedka IGAD oo saacadaha soo socdo furmi doonno.
Wafdiga madaxweyne Yoweri Moseveni ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho kusoo dhaweeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya.
Madaxweyne Yoweri Moseveni ayaa ka mid ah madaxda ka qeyb galeysa shirka urur goboleedka IGAD oo saacadaha soo socdo la filaayo inuu si toos ah uga furmo hoteel ku yaala garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Ammaanka garoonka Aadan Cadde ayaa ah mid aad loo adkeeyay, waxaana wafdiga madaxweyne Yoweri Moseveni loo gudbiyay qeybta uu goordhaw shirka ka furmayo.
Dhinaca kale, waxaa saacadaha soo socdo la filayaa inay magaalada Muqdisho soo gaaraan mas’uuliyiinta ka socota dalalka Sudan iyo South Sudan, waxaana markaasi kadib la gudda gali gali doonnaa furitaanka shirka madaxda urur goboleedka IGAD.
Shirka ayaa la filayaa inuu furo madaxweynaha dowladda federalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana shirka ka dib lagu wadaa in si wadajir ah shirkaasi looga soo saaro war-murtiyeed lagu faah-faahinaayo wixii shirka looga hadlay.